Si aad u noolaato ganacsiga aadka u tartamaya waa mid guuleysi ах, lakiin магнати tiknoolajiyaddan oo kaliya ma badbaadin, way ku soo koraan. Iyadoo ay ku jirto qiimo опит dhafan oo ka badan 1 трилион долара, kuwan billaabay maalgashadaan tiknoolajiyadeed ee madaxabannaan ayaa sii wadi doona liiska dadka ugu taajirsan adduunka.
Laakiin waa kuwee farsamooyinka casriga ах?
Akhriso oo baro si aad u ogaato farshaxan yaasha teknolojiyada kuwa iyagu dhaqaaqa iyo gubashada warshadaha teknojijiada maanta.
1 1. Бил Гейтс
2 3 Марк Зукърбърг
3 5 Лари Пейдж
4 7. Джак Ма
5 9 Стив Балмер
6 11. Масайоши Син
7 13. Пол Алън
8 15 Азим Премджи
9 17. Робин Ли
10 19. Дъстин Московиц
11 21. Джан Джидун
12 23. Тери Гуу
13 25. Чжоу Кунфей
Bishii Luulyo 2017, Jeff Bezos wuxuu si kooban u garaacay Bill Gates booskiisa si uu u noqdo ninka ugu qanisan adduunka. Agaasimaha iyo aasaasaha Amazon, Bezos wuxuu kufaraxay nasiibkiisa markii uu markii hore soo bandhigay loona beddelay fikirka e-ganacsiga. Markii Amazon uu marka hore bilaabay 1994, wuxuu ka shaqeynayay geerashka gurigiisa Seattle wuxuuna ahaa dukaanka buugta internetka. Tan iyo markaas, shirkadu waxay ku korodhay dhaqanka e-ganacsiga, oo wax walba ka iibsanaya macaamiisha macaamiisha iyo wax kasta oo u dhexeeya.
В реално време Net Miisaaniyad: $ 94.8 Милян
3 Марк Зукърбърг
Larry Ellison ayaa aasaasay Oracle Corp, oo ah shirkad barnaamijka ах, oo ku soo laabtay 1977 laba qof oo kale. Shirkadda ayaa inta badan ka faa’iideysatay mashaariicda CIA-да iyo horumarinta софтуер kaas oo gacan ka geysanaya macluumaadka macaamiisha xiriirka macaamiisha xiriirka macaamiisha. Ellison wuxuu booskiisa u dhiibay 2014 laakiin waxa uu sii ahaanayaa gudoomiyaha guddiga iyo madaxa tiknoolajiyadda ee Oracle.
Нета Мисаанияд в реално време: $ 60,1 Милян
5 Лари Пейдж
Doorka hadda jira: Madaxa Азбука
La qaybso Лари Пейдж, Сергей Брин ayaa Google galay shirkadda in ay tahay maanta. Brin wuxuu fure u ahaa fududeynta dib u dhiska Google ee 2015, oo ah shirkadda raadiyaha raadinta ee hoosta ku haysa shirkadda haynta ee Alphabet. Iyadoo loo marayo Азбука, wuxuu sii wadaa inuu sahamiyo mashaariicda "Лунен изстрел" cusub iyo fikradaha sida samaynta guryaha baabuurta leh iyo baabuurta iskiis u wadida.
В реално време Net Miisaaniyad: 47,3 милиона долара
Инженер Ма Хуатенг (ама Пони Ма) аяа ку хаулан войшадда тикнооладжияда маркии ууасаасай Tencent Holdings, ооа ай ширкадда угу вейн на Китай през 1998 г. "QQ", adeegga degdegga ах; Wechat, adeegga moobiilka oo ay la socdaan dadka isticmaala 900 милиона; iyo Cayaaraha Tencent, oo ah bulshada ugu wayn ee ciyaaraha internetka ee Shiinaha.
Реално време Net Miisaaniyad: $ 43.3 Милян
9 Стив Балмер
Aasaasaha shirkadda kumbuyuutarka oo magaciisa la yidhaa, Michael Dell wuxuu leeyahay awood badan oo uu ka helay Dell Technologies. Isku duubka Dell OO Лех boorsada keydka kombuyuutarka ее EMC Ayaa horseedaya helitaanka tiknoolajiyada ugu weyn ее Абид Су martay iyada OO lagu qiyaasay qiimihiisu yahay $ 60. Wuxuu SII wadaa inuu xoojiyo saamiga shirkadda 70 ее shirkadda waxana UU ку shaqeeyaa guddoomiye Ийо agaasin.
В реално време Net Miisaaniyad: $ 23.5 Милян
11. Масайоши Син
Елон Мъск wuxuu calaamad ф ahaa ganacsigii tiknoolajiga markii UU aasaasay PayPal, OO markii dambe lagu Су iibsaday иБей $ 1.4 $ ее 2002 Waxa UU SII waday inuu dhiso Tesla Motors, OO diiradda saaraaya Су saarista gawaarida си buuxda ф shaqeeya, Ийо SpaceX, shirkadda qamriga ee Musk ee lagu qiimeeyo $ 20.
Реално време Net Miisaaniyad: $ 19,7 Милян
13. Пол Алън
Guddoomiyaha Samsung Electronics Lee Kun-Hee ayaa sameeyey liiska inkastoo sanadihii ugu dambeeyay. Лий wuxuu ку dhacay cudurka wadnaha ее 2014 waxaana lagu seexiyay isbitaal Медицински Медицински център ку yaala Сеул Халка wiilkiisa, Джей Й., OO ла xiray, lagu Су eedeeyay, Ийо xabsi ку JIRA laaluushka 2017 Inkastoo taasi, shirkadda elektaroonigga ах waxay haysaa hoggaanka hoggaanka ee suuqa moobiilka iyada oo isticmaalkooda casriga ах.
Реално време Net Miisaaniyad: $ 21.7 Милян
15 Азим Премджи
Doorka hadda jira: Основател / Maamulaha Netease
Мид ка сред ах ганачияда угу ваауайан е интернетка ийо мообилка ей адудунка, Уилям Динг уукуу куфараксай насиибкииса ияда оо лоо марайо суука Шийнаха ей вейн ей цияараха. Wuxuu ahaa ninka ugu taajirsan Shiinaha, Internetka ugu horeeya iyo bilyaneerka ciyaaraha ee 2003. Shirkaddiisu waxay sii wadi doontaa inay ku raaxeeysato kobaca 67 boqolkiiba dakhliga ka soo gala 2016 oo ah wadar ahaan $.
Реално време Net Miisaaniyad: $ 18 Милян
Shiv Nadar wuxuu хормод ka ahaa ganacsiga IT-da Индия markii uu helay HCL 1976. Nadar wuxuu bilaabay samaynta xisaabiyeyaasha iyo microprocors-ka geerashiisa, dabadeedna lagu sii ballaariyey adeegyada software-ka. HCL Technologies waxay hadda bixisaa adeegga afaraad eeeeegga software ee Hindiya iyada oo lagu qiyaaso dakhliga ku baxa $ 7.5.
Реално време Net Miisaaniyad: $ 13.4 Милян
19. Дъстин Московиц
Shaqaalihii hore ee IBM Hasso Plattner ayaa ka tagay 1972 iyada oo отдалеч qof oo kale ay u soo bandhigeen SAP (Софтуер, приложения, продукти), софтуер за софтуер shirkad oo Jarmal ах. SAP waxay soo saartaa dakhli sanadle ах oo ka badan $ 20 bilyan oo doolar waana hoggaamiye suuqa B2B. Plattner ayaa hoos u dhigay sidii CEO през 2003 г. oo wuxuu sii ahaanayaa gudoomiyaha guddiga kormeerka SAP.
Реално време Net Miisaaniyad: $ 13.3 Милян
21. Джан Джидун
Eric Schmidt wuxuu hore u ahaan jiray agaasimaha Novell iyo sarkaal sare oo tiknoolajiyada Sun Microsystems ka hor inta uusan ku biirin Google. Schmidt wuxuu ahaa agaasimaha shirkadda 2001 ilaa 2011, kadibna wuxuu gudoomiye u noqday guddoomiyaha shirkadda Alphabet, oo ah shirkad Google ах, wuxuuna u shaqeeyaa danjiraha caalamiga ah ee Google.
Реално време Net Miisaaniyad: $ 13.5 Милян
23. Тери Гуу
Dietmar Hopp waxay ku biirtay Hasso Plattner iyo asxaabtii hore ee IBM iyagoo bilaabay shirkadda software SAP ee 1972. Hopp wuxuu u shaqeeyay wada-shaqaale ka socda 1988 illaa 1998 kadibna guddoomiyaha kordaeru iyaaa kyauka ilaaaya yaaaaa iyaaa kyauka ilaaakaya iaaaaa yaauu iyaaa yaauai iaaaaa yayau ваджахан шакада самафалка ай Диетмар Хоп Ститтунг, каоо у кайбияй в ка бадан $ 470 милян оо лоогу талагалай исбортиска, даавада, воксбарашада ийо барнаямиджая булшада.
Нета Мисаанияд в реално време: $ 10,6 Милян
25. Чжоу Кунфей
Si aad u noolaato ganacsiga aadka u tartamaya waa mid guuleysi ah, lakiin tycoons tiknoolajiyaddan oo kaliya ma badbaadin, manier ku soo koraan. Iyadoo ay ku jirto qiimo isku dhafan oo ka badan $ 1 triljoen, Koewe billaabay maalgashadaan tiknoolajiyadeed ee madaxabannaan ayaa sii wadi doona liiska dadka ugu taajirsan adduunka.
Waa hagaag, dhowr ka mid ah magacyadani waa inay yaqaanaan haddii aad waligaa ku faafisay shabakadda. Qaar ka mid ah, si kastaba ha ahaatee, waa pa cusub oo kor u qaadaya darajooyinka iyaga oo ka faa’iideysanaya warbaahinta bulshada iyo suuqa tiknoolajiyada moobiilka.
Akhriso oo baro si aad u ogaato farshaxan yaasha teknolojiyada kuwa iyagu dhaqaaqa en gubashada warshadaha technolojiyada maanta.
Bishii Luulyo 2017, Jeff Bezos wuxuu si kooban u garaacay Bill Gates booskiisa si uu u noqdo ninka ugu qanisan adduunka. Agaasimaha iyo aasaasaha Amazon, Bezos wuxuu kufaraxay nasiibkiisa markii uu markii hore soo bandhigay loona beddelay fikirka e-ganacsiga. Markii Amazon uu marka hila bilaabay 1994, wuxuu ka shaqeynayay geerashka gurigiisa Seattle wuxuuna ahaa dukaanka buugta internetka. Tan iyo markaas, shirkadu waxay ku korodhay dhaqanka e-ganacsiga, oo wax walba ka iibsanaya macaamiisha macaamiisha enyo wax kasta oo u dhexeeya.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 94,8 Milyan
Larry Ellison ayaa aasaasay Oracle Corp, oo ah shirkad barnaamijka ah, oo ku soo laabtay 1977 laba qof oo boerenkool. Shirkadda ayaa inta badan ka faa’iideysatay mashaariicda CIA-da iyo horumarinta sagteware kaas oo gacan ka geysanaya macluumaadka macaamiisha xiriirka macaamiisha xiriirka macaamiisha. Ellison wuxuu booskiisa u dhiibay 2014 laakiin waxa uu sii ahaanayaa gudoomiyaha guddiga iyo madaxa tiknoolajiyadda ee Oracle.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 60,1 miljoen
Doorka hadda jira: Madaxa Alfabet
La qaybso Larry Page, Sergey Brin ayaa Google galay shirkadda in ay tahay maanta. Brin wuxuu fure u ahaa fududeynta dib u dhiska Google ee 2015, oo ah shirkadda raadiyaha raadinta ee hoosta ku haysa shirkadda haynta ee Alphabet. Iyadoo loo marayo alfabet, wuxuu sii wadaa inuu sahamiyo mashaariicda "moonshot" cusub iyo fikradaha side samaynta guryaha baabuurta leh iyo baabuurta iskiis u wadida.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 47,3 miljoen
Ingenieur Ma Huateng (ama Pony Ma) ayaa ku howlan warshadda tiknoolajiyada markii uu aasaasay Tencent Holdings, oo ah shirkadda ugu weyn ee China ee 1998. Qaar ka mid ah ganacsiyada guuleysiga ah ee uu sameeyay Tencent Holdings waxaa ka mid ah "QQ", adeegga degdegga ah; Wechat, adeegga moobiilka oo ay la socdaan dadka isticmaala 900 miljoen; iyo Cayaaraha Tencent, oo bulhada ugu wayn ee ciyaaraha internetka ee Shiinaha.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 43,3 miljoen
Aasaasaha shirkadda kumbuyuutarka oo magaciisa la yidhaa, Michael Dell wuxuu leeyahay awood badan oo uu ka helay Dell Technologies. Isku duubka Dell oo leh boorsada keydka kombuyuutarka ee EMC ayaa Horseedaya helitaanka tiknoolajiyada ugu weyn ee abid soo martay iyada oo lagu qiyaasay qiimihiisu yahay $ 60. Wuxuu sii wadaa inuu xoojiyoqaqa shee sha.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 23,5 miljoen
Elon Musk wuxuu calaamad u ahaa ganacsigii tiknoolajiga markii uu aasaasay PayPal, oo markii dambe lagu soo iibsaday eBay $ $ 1,4 ee 2002. Waxa uu sii waday inuu dhiso Tesla Motors, oo diiradda saaraaya soo saarista gdaadda qamriga ee Musk ee lagu qiimeeyo $ 20.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 19,7 Milyan
Guddoomiyaha Samsung Electronics Lee Kun-Hee ayaa sameeyey liiska inkastoo sanadihii ugu dambeeyay. Lee wuxuu ku dhacay cudurka wadnaha ee 2014 waxaana lagu seexiyay isbitaal ku yaala Seoul se Mediese Mediese Sentrum halka wiilkiisa, Jay Y., oo la xiray, lagu soo eedeeyay, iyo xabsi ku jira laaluushka 2017. Inkastoo taasi, shiggaa wha ee suuqa moobiilka iyada oo isticmaalkooda casriga ah.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 21,7 Milyan
Doorka hadda jira: stigter / Maamulaha Netease
Mid ka mid ah ganacsiyada ugu waawayn ee internetka iyo moobiilka ee adduunka, William Ding wuxuu kufaraxay nasiibkiisa iyada oo loo marayo suuqa Shiinaha ee weyn ee ciyaaraha. Wuxuu ahaa ninka ugu taajirsan Shiinaha, Internetka ugu horeeya iyo bilyaneerka ciyaaraha ee 2003. Shirkaddiisu waxay sii wadi doontaa inay ku raaxeeysato kobaca 67 boqolkiiba dakhliga ka soo gala 2016 oo ah wadar ahaan $ bah.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 18 Milyan
Shiv Nadar wuxuu hormood ka ahaa ganacsiga IT-da Indië markii uu helay HCL 1976. Nadar wuxuu bilaabay samaynta xisaabiyeyaasha en microprocors-ka geerashiisa, dabadeedna lagu sii ballaariyey adeegyada software-ka. HCL Technologies het ‘n goeie weergawe van die sagteware vir Hindiya en het ‘n gratis weergawe van $ 7,5..
Real Time Net Miisaaniyad: $ 13.4 Milyan
Shaqaalihii hore ee IBM Hasso Plattner ayaa ka tagay 1972 iyada oo afar qof oo kale ay u soo bandhigeen SAP (sagteware, toepassings, produkte), sagteware sagteware oo Jarmal ah. SAP waxay soo saartaa dakhli sanadle ah oo ka badan $ 20 bilyan oo doolar waana hoggaamiye suuqa B2B. Plattner ayaa hoos u dhigay sidii CEO in 2003 oo wuxuu sii ahaanayaa gudoomiyaha guddiga kormeerka SAP.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 13.3 Milyan
Eric Schmidt wuxuu hore u ahaan jiray agaasimaha Novell en sarkaal sare oo tiknoolajiyada Sun Microsystems kan op Google gebruik word. Schmidt wuxuu ahaa agaasimaha shirkadda 2001 ilaa 2011, kadibna wuxuu gudoomiye u noqday guddoomiyaha shirkadda Alfabet, oo ah shirkad Google ah, wuxuuna u shaqeeyaa danjiraha caalamiga ah ee Google.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 13,5 miljoen
Dietmar Hopp waxay ku biirtay Hasso Plattner iyo asxaabtii hore ee IBM iyagoo bilaabay shirkadda software SAP ee 1972. Hopp wuxuu u shaqeeyay wada-shaqaale ka socda 1988 illaa 1998 kadibna guddoomiyaha kormeerka ilaa 2003. Wukauay daiúa dai kaha wajahan shaqada samafalka ah ee Dietmar Hopp Stiftung, kaas oo u qaybiyay in ka badan $ 470 miljoen dollar loogu talagalay isboortiska, daawada, waxbarashada en kinderamijyada bulshada.
Real Time Net Miisaaniyad: $ 10.6 Milyan